I-COVID-19 Ngelixa loyikekayo, amaxesha obunzima kule minyaka ikwakhuthaze ezinye zezona zinto zibalulekileyo zembali ezisasetyenziswayo namhlanje. Ukusuka kwi-ambulensi eyenziwe ngexesha lamaXesha Aphakathi ukunceda oogqirha ukuba bafike kwaye bathuthe abaguli ngokukhawuleza, benze i-tape ngexesha le-WWII bencedisa amajoni ukulungisa izixhobo ...
Njengoninzi ngakumbi nangakumbi kweminye imibutho yorhwebo, iChina China Manufacturers Association ikwasungule iiprojekthi ezijolise ekutsaleni isizukulwana esitsha. Namhlanje, ukugaya isizukulwana esilandelayo sabasebenzi kuyeyona nto iphambili kubenzi baseTshayina. Ndiyazi ukuba oku kuyavakala ...
Ulwelo lwesilica gel lufinyezwe njenge-LSR, eyimveliso enokuthandwa ngabathengi kunye nabavelisi. I-gel ye-silica eyelwelo yenziwe ngeemveliso zejeli yesilika. Inokuqina okuhle, ukungangenwa ngamanzi kunye nokufuma, kwaye iyamelana neasidi, ialkali kunye nezinye izinto zemichiza. Ngokubanzi u ...
Ukufunda inkqubo yokubumba inaliti yeplastiki kunokuba yinto encinci ekuqaleni. Inkampani yakho igqibe iiveki, iinyanga okanye mhlawumbi neminyaka yophando kunye nophuhliso ukuyila eyona mveliso intsha, enezona zinto zintsha kunye nempumelelo. Uqala ukumba ngokunzulu kwaye ucwangcise ukuba imveliso yakho ...
Ngaba ukhetha amaNqaku afanelekileyo kwiiNxalenye zePlastiki zakho?
Ukukhetha izinto ezifanelekileyo kulo naluphi na uhlobo lwemveliso kubalulekile ekwandiseni ukusebenza kunye nenzuzo yemveliso. Sukujonga nje ukuba yintoni isiphelo semveliso yakho. Qiniseka ukuba uyayazi ii-ins kunye nokuphuma kwendlela icandelo eliza kusetyenziswa ngayo kwaye yintoni eza kudibana nayo ...